Home Wararka Muxuu Yuusuf Garaad ka yiri qunsuliyadaha dalka Kenya ee Kismaayo iyo Hargeysa?
Muxuu Yuusuf Garaad ka yiri qunsuliyadaha dalka Kenya ee Kismaayo iyo Hargeysa?
Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay qunsuliyado ay dowladda Kenya qorsheyneyso inay ka furato ka furato magaalooyinka Kismaayo iyo Hargeysa ee Soomaaliya.
Halka akhri warbixintaas.
Qoraal uu facebook soo dhigay ayuu Yuusuf Garaad ku yiri:­ “Kenya waxay Afrika iyo Asia ka fureysaa 16 Xafiis Ergo­Diblomaasiyadeed oo hor leh. Waxay isugu jiraan Safaarado midkood laga furayo caasimadda Djibouti, Qunsuliyado iyo laba xafiis oo ay ka fureyso Hargeysa iyo Kismaayo.
Dhankeenna Soomaaliya dhowr iyo tobanka Safaaradood ee Danjire laawayaasha ah waxaan rajeynayaa in iyagana dhowaan la buuxin doono oo labada mas’uul ee waaxda Fulinta ee dalka ugu sarreeyaa ay
howlmaalmeedkooda mashquulka ah ay ku darsan doonaan magacaabidda Danjirayaal na matala.
Xiriirka laba waddan ka dhexeeya meesha ugu horreysa ee laga akhrisan karo waa wejiga uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Safaarad sannad ku­dhowaad amaba ka badan ahayd Danjire la’aan, iyo Safaarado ku yaal caasimado muhiim ah laakiin aan xataa hal diblomaasi joogin ma ahan sida ugu qurxoon ee lagu kobciyo xiriir wax wadaqabsi oo laba dal dhex mara.”
Previous articleYeey Qaban Doontaa markan Seefta RW Kheyre Ogow Wasiirka Xiga ee uu Kheyre damacsan yahay inuu xilka ka qaado & Beesha uu ka soo jeedo
Next articleUganda oo soo Afjareysa dagaalka Shabaab kula jirto ee ka socda Somalia & Sarkaal xog muhiim bixiyay
Wasiir Mukhtaar oo la ogaaday Sababta Kheeyre shaqo Joojinta Ugu...
Shir Muqdisho ka socda (maxaa looga hadlayaa)